SUDAN: Militariga oo xasuuqii ay geysteen ku eedeeyey Shacabka! • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / SUDAN: Militariga oo xasuuqii ay geysteen ku eedeeyey Shacabka!
SUDAN: Militariga oo xasuuqii ay geysteen ku eedeeyey Shacabka!
June 10, 2019 - By: Maxamed Cismaan
Taliska militariga Sudan ayaa maanta oo Isniin ah war ay soo saareen ku eedeeyey shacabka jidka xiray inay sabab u ahaayeen xasuuqii ay ciidamada geysteen 3dii bishan June.
Gen. Jamaleddine Omar oo maanta saxaafada la hadlay oo wax laga weydiiyey xasuuqii ay ciidamadooda geysteen ayaa sheegay in shacabka wadooyinka xiray ay iyagu yihiin kuwa sharciga jabiyey oo khal-khal geliyey amniga dalkaasi.
Maalintii labaad oo ay shaqo-joojinta sacoto ayaa laga dareemayaa magaalada Khatruum inuu aad hoos ugu dhacay dhaq dhaqaaqa, waxaa gebi ahaan xiran suuqyada iyo shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay, walow ay shaqeenayaan xafiisyada dowlada qaarkood.
Ciidamada ayaa lagu soo waramayaa inay sidoo kale xir xireen qaar kamid ah shaqaalaha Madaarka iyo Bangiga dhexe ee dowlada oo iyagu shaqo joojin sameeyey.
Waxaa gebi ahaan meesha ka baxday rajadii laga qabay in wadahadal lagu xaliyo xiisada dalkaasi ka jirta tan iyo 11kii April markii xilka laga tuuray Madaxweynihii hore Cumar Al Bashiir.
Militariga ayaa diidan inay dowlad shibil ah awooda ku wareejiyaan waxaana dhowr goor burburay wadahadalka, waxaana ugu danbeeyey dadaalkii uu sameeyey Raysalwasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed oo Jimcihii booqday khartuum isla markaana la kulmay Saraakiisha Militariga iyo ururada rayidka.
Saacado kadib kulamadii Abiye Ahmed ayey militariga Sudan xabsiga dhigeen qaar kamid ah hogaamiyayaashii mucaaridka ee la kulmay Raysalwasaaraha Itoobiya, arrintaasi oo meesha ka saartay rajadii laga qabay in xal laga gaaro wadahadalkaasi uu bilaabay hogaamiyaha Itoobiya.
Golaha Militariga Sudan ayaa cadaadis xoogan kala kulmay Beesha Caalamka, waxaana dalkaasi laga joojiyey xubinimadii Midowga Afrika.